Adeegyada - Mestech Industrial Limited
Maaddaama ay tahay shirkad wax soo saar xirfad leh, MESTECH ma bixiso oo keliya alaabooyinka, laakiin sidoo kale waxay bixisaa xalal farsamo oo dhan iyo adeegyo ah. Adeegyadan waxaa ka mid ah badeecadaha caagga ah, naqshadeynta caaryada qalabka wax soo saarka, soo saarista qaybaha, wax ka sameynta qaybaha, dib u soo celinta ka dib, naqshadeynta wax soo saarka iyo isku imaatinka, caddeynta kastamka dhoofinta iyo arrimo kale.
Qaab samaynta iyo cirbad wax taaj oo kale
MESTECH waxay leedahay nidaam wax soo saar caag ah oo dhameystiran. In ka badan 300 oo nooc oo wasakhahaasi caag ah ayaa la soo saaray sanad gudihiis, waxaana la bilaabay sameynta cirbadeynta iyo soo saarista alaabada balaastigga ah. Heerka caaryada waa HASCO, DEM, MISUMI iyo CHINA. Marka lagu daro la kulanka macaamiisha gobolkan, wasakhdeena waxaa sidoo kale loo dhoofiyaa Yurub, Waqooyiga Ameerika iyo Aasiya iyo dalal iyo gobollo kale.
(Akhri wax dheeraad ah)
Biraha adag ayaa leh dhibic ka dhalata, adkaanta iyo xoogga, tabinta, ductility iyo dhalaalka macdanta marka loo eego waxyaabaha kale. Adoo hagaajinaya isku-darka gudaha iyo qaab-dhismeedka moodeelka ee biraha, waxaan ka heli karnaa waxyaabo aad uga sarreeya kuwa caagga ah iyo kuwa kale ee aan birta ahayn
Daawaha birta ee wanaagsan iyo qaybo sax ah oo sarreeya ayaa la heli karaa. Sidaa darteed, qaybaha biraha waxaa si ballaaran loogu adeegsadaa mashiinnada iyo qalabka, warshadaha kiimikada, duulista, aerospace, hagista, gaadiidka, laydhka, daaweynta iyo korontada.
Biraha sida caadiga ah loo isticmaalo waa birta, aluminium ka samaysan, zinc alloy, copper, daawaha naxaasta ah iyo daawaha titanium. Hababka wax lagu farsameeyo ee qaybaha iyaga ka samaysan way ka duwan yihiin sababtoo ah qaabdhismeedyadooda kala duwan, isku-darka iyo adeegsigooda. Marka lagu daro dhalaalinta birta, tikniyoolajiyadaha wax soo saarka ee ugu muhiimsan ee aan u isticmaalno si aan u helno cabbirka iyo qaabka ugu dambeeya ee biraha ayaa kala ah: shubista dhinta, kala-goynta budada iyo farsameynta
Badeecad qumman ayaa hubaal ka timaadda naqshad aad u fiican marka hore.
Horumarinta tikniyoolajiyadda internetka iyo soo ifbixinta tikniyoolajiyadda wax soo saarka cusub, cusboonaysiinta alaabada cusub ee suuqa maanta ayaa ka dhaqso iyo dhakhso badan. Sida loogu oggolaado alaabadaada inay suuqa kusoo galaan waqtiga ugu yar ayaa fure u ah tartanka shirkadaha. Shirkado badan ayaa badanaa ku aaminay ilaha dibedda inay dhammaystiraan qaar ama inta badan shaqada naqshadeynta wax soo saarka, si loo soo gaabiyo wareegga horumarinta wax soo saarka, ayna diiradda u saaraan howlaha suuqa iyo waxyaabaha aasaasiga ah.
Injineerada Mestech waxay bixin karaan qaybo balaastig ah, qaybo qalab iyo naqshadeynta qaab dhismeedka wax soo saarka, falanqaynta suurtagalnimada, iyo sidoo kale soo saarista caaryada daba-galka ah, soosaarka qaybaha iyo howlaha isku-dhafka badeecada ee dhammaaday iyadoo loo eegayo shuruudaha wax soo saarka macaamiisha
Badeecad cusub laga soo bilaabo bilowgii naqshadaynta wax soo saarka iyo suuqgeynta, inta badan waxay u baahan tahay inay maal galiso lacag badan, tamar iyo waqti badan. Tayada naqshadeynta alaabta ayaa si toos ah u go'aamisa guusha badeecada. Nooca noocyadu waa qaab muhiim ah oo lagu tijaabiyo naqshadeynta alaabta. Waxaa loo isticmaalaa in lagu hubiyo dhibaatooyinka jira qaabeynta wax soo saarka, hagaajinta naqshadeynta, iskana ilaaliso khaladaadka waaweyn ee horseeda khasaarooyinka waaweyn marxaladda dambe. Tusaale ahaan, gawaarida, diyaaradaha, maraakiibta iyo qalabka elektarooniga iyo korantada, noocyada noocyada ah marwalba waxaa loo sameeyaa xaqiijin ka hor inta aan si rasmi ah loo soo saarin caaryada iyo qaybaha.
Mestech waxay awood u leedahay inay siiso macaamiisha CNC, daabacaadda 3D ee qaybo balaastig ah iyo qaybo bir ah iyo sidoo kale samaynta qaab gacan ku samays ah oo loo yaqaan 'SLA', iyo sidoo kale wax soo saar dufcaddeed oo yar.
Wax soo saarka alaabta
Waxaa jira kumanaan alaabood oo suuqa yaal, kuwaas oo si joogto ah loo cusbooneysiiyo maalin kasta. Tartanka suuqa ayaa sii kordhaya. Shirkadaha wey kala duwan yihiin. Shirkado badan, oo ku xaddidan astaantooda ganacsi, waxay diiradda saaraan naqshadeynta iyo horumarinta suuqa ama alaabada cusub ee tikniyoolajiyadda, mana sameystaan ​​warshad ay ku shiraan badeecadooda.
Waxaan ku siin karnaa isku imaatin wax soo saar iyo taageero farsamo macaamiisha noocaas ah. Waxaa ku jira taxane ah adeegyo hal-joogsi ah sida nashqadeynta wax soo saarka, soosaarka qaybaha, soo iibsiga iyo isku imaatinka.
Adeegyada aan bixinno
Si loo bixiyo adeegyo tayo sare leh iyo waxsoosaar balaastiig caag ah, birta u dhinta iyo makiinada waa mid kamid ah ujeedooyinka ugu muhiimsan ee MESTECH. Qalabkeena iyo tas-hiilaadkeena aadka u wanaagsan, waxaan sidoo kale leenahay koox injineero khibrad leh iyo shaqaale xirfad leh. Waxaan dammaanad ka qaadaynaa tayada wax soo saarkayaga iyo adeegyadeena iyada oo loo sii marayo horumarinta joogtada ah ee tikniyoolajiyadda iyo farsamada casriga ah, iyo sidoo kale abaabul iyo maamul adag.
Soosaarka badeecadu had iyo jeer wuxuu ka kooban yahay silsilado taxane ah oo la xiriira. Si loo daboolo baahiyaha soo koraya ee macaamiisha, waxaan bixinnaa adeegyo furfuran oo laga soo qaatay naqshadeynta bilowga ah, horumarinta, soo saarista illaa shirarka wax soo saarka. Waxaad wax badan ka ogaan kartaa mid kasta oo ka hooseeya ama haddii kale, nala soo xiriir si aan ugala hadalno shuruudahaaga.